WhatsApp yeMac, dhawunirodha yepamutemo app uye dzimwe nzira | IPhone nhau
Rimwe rematambudziko anowanzosangana nevashandisi veMac ndizvo chaizvo mukana wekuisa mamwe mafomu ayo mune mamwe masisitimu anoshanda ane rutsigiro rukuru kubva kune vanogadzira uye kuti munzvimbo yeApple yakatemerwa hutapwa. Muchiitiko cheichi chishandiso, isu tine dzakawanda dzimwe nzira dzekuisa WhatsApp yeMacOS.
Kwenguva yakati isu tanga tichishandisa yakavhurwa sosi kunyorera kwakagadzirwa nevanobatsira vanogadzira, zvakadaro WhatsApp yakatangwa pakupera kwaKurume 2016 iyo yepamutemo WhatsApp kunyorera Mac.
1 Dhawunirodha WhatsApp yeMac
2 Mashandisiro aungaita WhatsApp yeMac
Dhawunirodha WhatsApp yeMac
Maitiro acho akapusa, anokurumidza uye akasununguka zvachose. Dhawunirodha WhatsApp yeMac yemahara iri nyore sekuenda kune WhatsApp yepamutemo peji uye kurodha mutengi wayo weMac.
Kamwe pawebsite, inozozvionera otomatiki kuti yedu yekushandisa system chii, uye ichatibvumidza kurodhaunirodha nekudzvanya pa "download for Mac" Dhawunirodha iyo WhatsApp .dmg faira kuti umise zviri nyore uye nekukurumidza pane yedu MacOS.
Parizvino, kuenderana kwacho ndekweMacOS chete. Zvisinei, isu tinewo zvimwe dzimwe nzira dzeMac senge Franz, chishandiso chakasununguka zvachose uye chinotibvumidza kushandisa WhatsApp paMac nenzira yakapusa sezvausina kumbofungidzira, iwe unofanirwa kurodha pasi kubva pawebhusaiti yavo.
Mashandisiro aungaita WhatsApp yeMac
Zvakanaka zvinosuruvarisa, iyo WhatsApp mutengi weMac ndizvo zvinozivikanwa se "webhu app", ndiko kuti, uri mufananidzo mudiki webrowser iyo inotibvumidza kuita mabasa WhatsApp Web. Muchidimbu, iri yakajeka vhezheni yeWhatsApp Web, asi yakaiswa pane yedu yekushandisa system. Nenzira iyi, isu tatoziva kuti maitiro ekuteedzera ndeapi.
Tinofanira kuisa iyo.WhatsApp dmg yeMac izvo zvatakambotora pasi, uye wozozviita. Kana yatanga chete, kodhi "Bidi" ichaonekwa pachiratidziri, panguva iyoyo tichaenda kune iyo iPhone kana Android matinowanzoshandisa WhatsApp. Ipapo, isu tinopinda marongero eWhatsApp uye tinya pane "WhatsApp Web" sarudzo.
Kuwedzeredzwa kwekamera kuchavhura izvo inokutendera iwe kuongorora iyo iri pamusoro Bidi kodhi uye isu tichatanga ku shandisa WhatsApp paMac mahara. Uyu mutengi anotibvumidzawo isu kutumira uye kurodha zvakajairwa WhatsApp mapikicha uye mavhidhiyo, senge anoenderana magwaro, PDF uye .docx.